ဦး နှောက်မှ hypocretins နှင့်၎င်းတို့၏ receptors: allostatic နှိုးဆွ၏ mediators (2009) - သင့် ဦး နှောက် On Porn
Curr Opin Pharmacol ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2013 အောက်တိုဘာ7အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
Curr Opin Pharmacol ။ 2009 ဖေဖော်ဝါရီ;9(1): 39-45 ။
မဿဲအီး Carter က, Jana Schaich Borgနှင့် လူးဝစ်က de Lecea
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် Curr Opin Pharmacol
အဆိုပါ hypocretins (-also "orexins" ဟုခေါ်အတိုကောက် "Hcrts") တို့သည်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus အတွက်အာရုံခံ၏သေးငယ်တဲ့လူဦးရေအားဖြင့်သီးသန့်လျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက်နှစ်ခု neuropeptides ဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကား peptides သိမြင်မှုကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ဇီဝကမ္မလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ဆက်စပ်အရေးပါအတွက်ဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံးတည်ရှိနှစ်ခု receptors မှခညျြနှောငျ။ အစပိုင်းမှာဦးနှောက် Hcrt စနစ်ကအိပ်ပျော်ခြင်း / ပါတီအားအသွင်ကူးပြောင်းမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ဍရှိသည်ဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ လတ်တလောလေ့လာမှုတွေ Hcrts အစားအစာစားသုံးမှု, စွဲလမ်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများအပါအဝင်အခြားဇီဝကမ္မလုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေစေခြင်းငှါဖော်ပြသည်။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာမှုများတစ်ခုသက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်တွင်မမျှော်လင့်ဘဲဖိအားများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများတုံ့ပြန်ရမယ်အထူးသဖြင့်အခါ, arousal ဖြန်ဖြေအတွက် Hcrts များအတွက်ယေဘုယျအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဒါဟာ hypocretins (Hcrts) ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကတည်းကဆယ်စုနှစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အတိတ်ကာလဆယ်နှစ်ကာလအတွင်းသူတို့ရဲ့စကားရပ်, ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုအကြောင်းအများကြီးသင်ယူကြသည်။ ချက်ချင်းနီးပါးဟာသူတို့ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုပြီးနောက်နိုးနိုးကွားကွားထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် Hcrts ၏အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍ [သောလူသားမြားအပါအဝငျအမျိုးစုံမျိုးစိတ်အစီရင်ခံခဲ့သည်1-5] ။ နောက်ဆက်တွဲနှစ်ပေါင်း Hcrts ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်သောမနိုးသွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်သောနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထားသာခဲကြပါပြီ, သူတို့ယခုယေဘုယျအားဖြင့် "arousal-မြှင့်တင်ရန်" peptides [ဖြစ်စဉ်းစားနေကြတယ်6-7] ။ မကြာသေးမီက Hcrts လည်းဇီဝကမ္မလုပ်ငန်းဆောင်တာမနိုးထက်အခြားအပြုအမူတွေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတှငျကြှနျုပျတို့ဦးနှောက် Hcrts နှင့်၎င်းတို့၏ receptors ခြုံငုံသုံးသပ်သည်ဤကွဲပြားခြားနားဇီဝကမ္မလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် Hcrts များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ implicating မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများလေ့လာ။ ဒီလေ့လာမှုတွေပေါင်းစည်းဖို့ကြိုးစားနေတှငျကြှနျုပျတို့ Hcrts နှစ်ခုယေဘုယျလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနိုးနိုးကွားကွားနှင့် allostatic arousal ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ Hcrts [နှောင်းပိုင်း 1990s အတွက်အုပ်စုနှစ်စုအားဖြင့်လွတ်လပ်စွာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်8,9] ။ သူတို့ကလျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက် peptides, hypocretin-1 နှင့် hypocretin-2 တရံထားရှိရေး (Hcrt1 နှင့် Hcrt2; လည်းအသီးသီး "orexin တစ်ဦးက" နှင့် "orexin B က" အဖြစ်လူသိများ) ။ ဤရွေ့ကား peptides [အတူတူပင်မျိုးဗီဇရှေ့ပြေး "preprohypocretin" (ppHcrt) မှလုပ်ငန်းများ၌နေကြတယ်နှင့်ဦးနှောက်၏ perifornical နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic ဧရိယာထဲမှာသီးသန့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်8,9] ။ Hctrs နှင့်၎င်းတို့၏ receptors ကိုလည်းအစွန်အဖျားမှာရှိတဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြသည်  သို့သော်ဤသုံးသပ်ချက်ကိုငါတို့သည်ဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏ Hctrs အာရုံစိုက်ပါ။
ဦးနှောက် Hcrt အာရုံခံ [afferent အဆိုပါ hypothalamus အများအပြားအရေးပါထံမှစီမံချက်များ, အ allocortex, claustrum, အ stria terminalis, periaqueductal မီးခိုးရောင်, dorsal raphe နျူကလိယနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် parabrachial နျူကလိယ၏အိပ်ရာနျူကလိယကိုလက်ခံရရှိ11] ။ Hcrt အာရုံခံ [GABAergic, glutamatergic နှင့် cholinergic အာရုံခံဆီက input ကိုလက်ခံရရှိ12] ။ ထို့အပွငျ စသည်တို့အတွက် electrophysiology လေ့လာမှုများ [အများအပြား neurotransmitters / neuromodulators (အချက်လွှတ် corticotropin, ghrelin, neurotensin, vasopressin နှင့် oxytocin အပါအဝင်) Hcrt အာရုံခံ excite သို့မဟုတ် (serotonin, noradrenalin, dopamine, neuropeptide Y ကိုနှင့် leptin အပါအဝင်) Hcrt အာရုံခံတားစီးသရုပ်ပြ13].
အဆိုပါ noradrenergic locus coeruleus (LC) မှထင်ရှားတဲ့စီမံချက်များ, အ histaminergic tuberomammilary နျူကလိယ (TMN), အ serotoninergic raphe အရေးပါသည် dopaminergic ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) အပါအဝင်ဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများတွင်မှအလှည့်၌, Hcrt အာရုံခံစီမံကိန်းကိုသည် cholinergic pedunculopontine tegmental ဧရိယာ (PPT) နှင့် laterodorsal tegmental ဧရိယာ (LDT), နှင့် galaninergic ventrolateral preoptic နျူကလိယ (VLPO)  ။ Hcrt အာရုံခံကိုလည်းနှောက် cortex တလျှောက်လုံးပျံ့ပရောဂျက်။ Hcrts [excitatory peptides ဖြစ်ကြပြီး သို့ဖြစ်. ၎င်းတို့၏ efferent ပစ်မှတ် depolarize8,9].
အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤခန္ဓာဗေဒနှင့် electrophysiological လေ့လာမှုများ Hcrt အာရုံခံသည်အခြား neuromodulators ဖော်ပြနှင့် (ကွဲပြားခြားနားဇီဝကမ္မလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်အပြုအမူတွေကိုထိန်းညှိနိုင်စွမ်းသောအများကြီး, မြောက်မြားစွာဦးနှောက်ဒေသများမှဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်နှင့်အစွန်အဖျား, နှင့်စီမံကိန်းကနေ homeostatic အချက်ပြမှုများအမျိုးမျိုးပေါင်းစည်းကြောင်းအကြံပြုပုံ 1).
hypocretin အာရုံခံခြင်းနှင့် hypocretin receptors ၏ထုတ်ဖော်ပြောဆို Afferent စီမံချက်များ
အဆိုပါ hypocretin receptors
နှစ်ဦးစလုံး Hcrt peptides [နှစ်ခု Hcrt receptors, hypocretin အဲဒီ receptor 1 (Hcrtr-1-လည်း "OxR1" ဟုခေါ်) နှင့်2(Hcrtr-2-လည်း "OxR2" ဟုခေါ်) ကိုကွဲပြားခြားနားသောဆှဖှေဲ့နှင့်အတူခညျြနှောငျ8,9] ။ Hcrt-r1 [မြင့်မားသောဆှဖှေဲ့နှင့်အတူ Hcrt1 ချည်နှောင်ခြင်းနှင့် 2-ခေါက်အောက်ပိုင်းဆှဖှေဲ့ဖို့ 100 နှင့်အတူ Hcrt1000 ချည်နှောင်9,15] ။ Hcrt-r2 (Hcrt1 နှင့် Hcrt2 နှစ်ဦးစလုံးတွေအတွက်မြင့်မားတဲ့ဆှဖှေဲ့ရှိပါတယ်ပုံ 2).
ဦးနှောက် hypocretins နှင့်၎င်းတို့၏ receptors
အဆိုပါ Hcrt receptors (အထကျဖျောပွထားသ hypocretin အာရုံခံ၏ anterograde projections ဖြင့်ကိုက်ညီနေတဲ့ပုံစံအတွက် postsynaptic ဆိပ်ကမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးနေကြတယ်ကိန်းဂဏန်းများ 1 နှင့် and2) 2) [6,8,9,14] ။ Hcrt-r1 mRNA အဆိုပါ hypothalamus သည် LC, အနှောက် cortex နှင့်အတော်ကြာ brainstem အရေးပါအတွင်းတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဆနျ့ကငျြ, Hcrt-r2 mRNA အဆိုပါ brainstem အတွက် cholinergic အရေးပါသည် ventral tegmental ဧရိယာနှင့် TMN အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်အဖြစ် hypothalamus အတွက် Hcrt-r1 နှင့်အတူစကားရပ်ထပ်။ တိကျတဲ့ရန် (တစ်မရှိခြင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြောင့်ထောင့်ကွက် 1), နည်းနည်း Hcrt-r1 နှင့် Hcrt-r2 များ၏ကွဲပြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအကြောင်းကိုလူသိများသည်။ သို့သော် Hcrt-r2 ခေါက်ထွက်တိရိစ္ဆာန်များ, ဒါပေမယ့်မရ Hcrt-r1 ကြွက်, narcolepsy ပြထို့ကြောင့် arousal တည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဒီအဲဒီ receptor များအတွက်ထင်ရှားတဲ့အခန်းကဏ္ဍ supporting ။
အဆိုပါ Hcrt စနစ်၏ Pharmacological ထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်း
အိပ်စက်ခြင်းနှင့်အခြားအာရုံကြောချို့ယွင်းအတွက် Hcrts ၏အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍပေးထားသောများစွာသောဆေးဝါးကုမ္ပဏီများ Hcrt system ကိုပစ်မှတ်ထားဖို့အေးဂျင့်များဖွံ့ဖြိုးဆဲကြိုးစားခဲ့ကြ Vivo အတွက်  ။ စာပေများတွင်အများဆုံးမကြာခဏအသုံးပြုကြသည် Hcrt ရန် SB-334867 ဖြစ်ပါတယ်  ။ အဲဒါကိုအဖြစ်ကောင်းစွာ binding Hcrtr-1 အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးပေမယ့်ဒါကရန်, Hcrtr-2 binding စနစ်နှင့် reversibly လုပ်ကွက်ထိုးသွင်းနိုင်ပါသည်။ SB-334867 အများအပြားတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည် စသည်တို့အတွက် Hcrt အာရုံခံ၏လေ့လာမှုများဒါပေမယ့်လည်း 100 + ကျော်အတွက် Vivo အတွက် အစားအစာစားသုံးမှု, အိပ်စက်ခြင်း, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စွဲအပါအဝင်အများအပြားအပြုအမူတွေအတွက် Hcrts ၏အခန်းကဏ္ဍကို elucidating လေ့လာမှုများ, ။
အဆိုပါနောက်ဆုံးပေါ် Hcrt အဲဒီ receptor ရန်, ACT-078573 ( "Almorexant")  အလွယ်တကူထိုအသွေး-ဦးနှောက်အတားအဆီးဖြတ်သန်းသွားသည်နှင့် reversibly လုပ်ကွက်, နှုတ်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနိုင်နှစ်ဦးစလုံးအမြင့်ဆုံးဆှဖှေဲ့နှင့်အတူ Hcrt receptors ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပိုပြီးအရေးကြီးတာက, ပဏာမစမ်းသပ်မှုတွေအတွက်ဒီဒြပ်ပေါင်းများကြောင့်အိပ်မပျော်ကုသမှုများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အလားအလာအောင်, (နှစ်ဦးစလုံး Hcrt receptors တစ်ခုထိရောက်ရန်ကနေကြိုတင်ခန့်မှန်းစေခြင်းငှါအဘယျသို့ပေမယ့်) cataplexy ထုတ်ယူမပေးပါဘူး။ ထို့ကြောင့် ACT-078573 ဖွယ်ရှိဓာတ်ခွဲခန်းခုံတန်းလျားမှာဆေးခန်းများတွင်နှစ်ဦးစလုံး, အများကြီးအနာဂတ်လေ့လာမှုများ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အသုံးပွုနိုငျကွောငျးကိုအဘယ်သူမျှမအစွမ်းထက် Hcrt agonists လက်ရှိတွင်ရှိပါတယ် Vivo အတွက် နှစ်ခု Hcrt peptides သူတို့ကိုယ်သူတို့ထက်အခြား။ တိရိစ္ဆာန်သုတေသနအတွက်ဤ peptides မကြာခဏတိုက်ရိုက် discrete ဦးနှောက်ဒေသများသို့ microinjected နေကြသည်သို့မဟုတ်ဦးနှောက်ရဲ့ ventricular သည့်စနစ်သို့ intracerebroventricularly ထိုးသွင်း။ စနစ်တကျထိုးသွင်းသည့်အခါသို့သော်လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက် Hcrt peptides [အတော်လေးထိရောက်မှုရှိပါတယ်52] ။ ထို့ကြောင့်, narcolepsy သို့မဟုတ် cataplexy လက္ခဏာတွေအများဆုံးမကြာခဏကအခြားဦးနှောက် arousal စနစ်များကိုပစ်မှတ်ထားကြောင်းဒြပ်ပေါင်းများကို အသုံးပြု. ကုသနေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Modafinil narcolepsy နှင့်အခြားအိပ်စက်ခြင်းရောဂါကုသမှုများအတွက် FDA ကအတည်ပြုသည်။ [ဒီပါတီအား-မြှင့်တင်ရန်ဝင်းဖြစ်နိုင် dopamine Transporter ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်, ဒါပေမယ့်လုပ်ဆောင်ချက်အတိအကျယန္တရားမသိနိုင်ပါဘူး52].
အစားအစာ-စားသုံးမှု, ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့, စိတ်ဖိစီးမှု, သတိဝီရိယနှင့်စိတ်ကျရောဂါအတွက် Hcrt စနစ်၏အသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိအခန်းကဏ္ဍပေးထားသောကြောင့် Hcrt စနစ်၏ကြောင်းခြယ်လှယ်မှနျးဖို့သွေးဆောင်သည်ထိုကဲ့သို့သောအဝလွန်ခြင်း, မူးယစ်ဆေးစွဲအဖြစ်မမှန်များ၏ကုသမှုများအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည် စိုးရိမ်စိတ်, အာရုံစူးစိုက်မှုကို-လိုငွေပြမှုရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကျရောဂါ။ အနည်းဆုံးကဤအလားအလာကုသမှုရွေးချယ်စရာအချို့အထက်ဖော်ပြထားတဲ့အသစ်နှင့်တိုးတက် Hcrt အဲဒီ receptor ရန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပေးထားသောယခုဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။
arousal တည်ငြိမ်ရေးအတွက် hypocretins ၏အရေးပါအခန်းကဏ္ဍ
သည်အခြားအစွမ်းထက်တဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းပိုမိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်သက်သေအထောက်အထား, Hcrts မြှင့်တင်ရန်နှင့်နိုးနိုးကွားကွားထိန်းသိမ်းရန်ကြောင်းပြ [6-7,13] ။ ဗိုလ်မှူးအထောက်အထား Hcrt စနစ်၏ချွတ်ယွင်း [ကြွက်, ခွေးနှင့်လူသားအတွက်အိပ်စက်ခြင်းရောဂါ narcolepsy ဖြစ်စေသောမူရင်းတွေ့ရှိချက်ကနေအဓိကအားထား1-5] ။ အများစုကလူ့ narcoleptics သူတို့ရဲ့ cerebrospinal fluid အတွက် Hcrt ၏အဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့ကြနှင့် postmortem ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ [လူ့ narcoleptic ဦးနှောက်ထဲမှာ Hcrt အာရုံခံတစ်လျှော့ချရေးထုတ်ဖော်ပြသ4,5] ။ စိတ်ဝင်စားစရာ, အ Hcrt system ကို [ယေဘုယျမေ့ဆေးအနေဖြင့်ပုံမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်လည်းလိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်16] ။ Hcrt1 နှင့် / သို့မဟုတ် Hcrt2 ၏ Intracerebroventricular (icv) ဆေးထိုးနိုးသုံးစွဲအချိန်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကျောရိုးရှိသတ္တဝါမျိုးစိတ်အမျိုးမျိုးအတွက်အနှေးလှိုင်းနှင့် REM အိပ်စက်ခြင်းအတွက်သုံးစွဲအချိန်ကိုလျော့ချ [17-18] ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးအလင်း-activated စုံလုံရုပ်သံလိုင်း, channelrhodopsin-2 သုံးပြီး Hcrt အာရုံခံ၏အတုဆွ [နှေးကွေး-လှိုင်းနှင့် REM sleep ကိုနှစ်ဦးစလုံးစဉ်အတွင်းနိုးနိုးကွားကွားမှအိပ်ပျော်ရာမှအသွင်ကူးပြောင်းမှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေ19] ။ ထို့ကြောင့် Hcrts ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်သောမနိုးသွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်သောဖြစ်ကြောင်းအစိုင်အခဲသက်သေအထောက်အထားယခုလည်းမရှိ။
အဆိုပါ hypocretin စနစ်၏အခြားအအလားအလာလုပ်ဆောင်ချက်များကို
Hcrts နိုးနိုးကွားကွားထိန်းသိမ်းခြင်းထက်အခြားများစွာသောဇီဝကမ္မလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရနေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Hcrts ၏အခြားအမည်အား Hcrts ၏ icv ပြုတ်ရည်ကြွက်များတွင်အစားအစာစားသုံးမှုတိုးပွားလာသောကွောငျ့, "orexins" [designated ခဲ့သည်9] ။ ဤရလဒ်သည်ယခု Hcrts ၏ပါတီအား-မြှင့်တင်သက်ရောက်မှုတစ်ခုသွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စဉ်းစားပေမယ့်ဒီတုန်းပဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုတက်ကြွဧရိယာဖြစ်ပါတယ်နေကြသည်။ အဆိုပါ arcuate နျူကလိယသို့ Hcrts ၏ Microinjection orexigenic GABAergic အာရုံခံလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့် anorexigenic POMC-ဖော်ပြအာရုံခံဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ Hcrts လည်း [က, ventromedial hypothalamus တစ်ခုထူထောင်မွတ်မပြေနိုင်သောစင်တာတွင် neuron တားစီး20] ။ ထို့ကြောင့် Hcrts အဆိုပါ hypothalamus ၏အရေးကြီးသောစွမ်းအင် homeostatic ဒေသများအတွက်မွတ်မပြေနိုင်သောဟော်မုန်း leptin တစ်ဦးအပြန်အလှန်ထုံးစံ၌ပြုမူဆောင်ရွက်။
မကြာသေးမီက Hcrts များအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အခန်းကဏ္ဍဆုလာဘ်-ရှာခြင်းနှင့်စွဲတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Hcrt အာရုံခံ၏ activation မူးယစ်ဆေးနှင့်အစားအစာဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်တွေကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ VTA သို့မဟုတ် ventricles သို့ Hcrt အာရုံခံသို့မဟုတ် Hcrt1 ၏ microinjection ၏ stimulation ယခင်ကငွိမျးမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူတွေ reinstates, ဤသက်ရောက်မှု [တဲ့ Hcrtr-1 ရန်ပိတ်ဆို့ထားပါသည်21,22] ။ ဤရွေ့ကား seminal လေ့လာမှုများ [ထပ်တလဲလဲ Hcrts ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ modulate အတည်ပြုကြောင်းသုတေသနတစ်ခုလျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်စေခဲ့သည်ပါပြီ23].
arousal / နိုးနိုးကွားကွားတိုးမြှင့်ကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုလည်းမကြာခဏစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောကတိုးမြှင့်။ ထို့ကြောင့်, နိုးနိုးကွားကွားမြှင့်တင်ရန် Hcrts များ၏စွမ်းရည်ကိုဤအ peptides စိတ်ဖိစီးမှု၏အမူအကျင့်များနှင့်ဇီဝကမ္မထူးခြားချက်တိုးမြှင့်အတွက်အခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ ဒီအယူအဆ၏ထောက်ခံမှုခုနှစ်, Hcrt1 ၏ icv ဆေးထိုး [အများအပြားစိတ်ဖိစီးမှု-related အပြုအမူတွေ elicits17,24] ။ တိုးမြှင့် Hcrt လှုပ်ရှားမှုကိုလည်း [ထိုကဲ့သို့သောယုတ်သည်သွေးလွှတ်ကြောသွေးပေါင်ချိန်၏မြင့်, နှလုံးခုန်နှုန်း, အောက်စီဂျင်စားသုံးမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှု-related ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလုပ်ငန်းစဉ်များ, အမျိုးမျိုးဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်25-27] ။ အချက်တစ်ချက်လွှတ် corticotropin မှထိုမှတပါး, Hcrt အမျှင်စီမံကိန်းကို (CRF) ကို paraventricular နျူကလိယ (PVN) အတွင်းအာရုံခံ [28-29] စိတ်ဖိစီးမှုမှ organismal တုံ့ပြန်မှုဝင်ရိုးဟာ hypothalamus-pituitary-adrenal (HPA) ကိုသက်ဝင်ကြောင်းအာရုံခံ။ Hcrt1 ၏ရေချိုး application ကို [ဤအ CRF ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ depolarization နှင့်တိုးပွားလာဆူးကြိမ်နှုန်း elicits28] ။ ဒါကသက်သေအထောက်အထား Hcrts အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးနှင့်အခြားစိတ်ဖိစီးမှုကို-related ဖြစ်စဉ်များကိုသက်ဝင်စေဖို့အလယ်ပိုင်း CRF စနစ်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။
အစားအစာစားသုံးမှု, စွဲလမ်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအပြင်, Hcrts လည်း [အာရုံစိုက်ကြွက်မော်ဒယ်များ်ပတ်သက်နေကြပြီ30] နှင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ  ။ Hcrts လည်းပါကင်ဆန်ရောဂါ၏လက္ခဏာများအတွက်အခန်းကဏ္ဍမှတွေးဆခဲ့ကြ  schizophrenia [33-34] နှင့်စိတ်ကျရောဂါ [35-36] ။ ပေါင်းလဒ်မှာ Hcrt စနစ်၏လေ့လာမှုများဝေးအိပ်စက်ခြင်းမနိုးအတွက် Hcrts များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏ကနဦးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကျော်လွန်ပြီးတိုးတက်ပါပြီ။ ဘယ်လို Hcrts ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားနိုးနိုးကွားကွားကနေအစားအစာစားသုံးမှုအထိအပြုအမူတွေ၏လက်နက်တိုက်, စွဲလမ်း, စိတ်ဖိစီးမှု, သတိဝီရိယနှင့်ပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အခန်းကဏ္ဍနိုင်သည်ဒီလေ့လာမှုတွေကမေးခွန်းတောင်းပန်? အောက်တွင်ကျနော်တို့ဤမေးခွန်းကိုဖို့ပဏာမအဖြေပေးထားပါသည်။
Hypocretins: arousal နှင့် allostasis ၏အားပြိုင်မှု
နိုးနိုးကွားကွားမြှင့်တင်ရန်အတွက် hypocretin စနစ်၏အခန်းကဏ္ဍမကြာခဏအတွက်အခန်းကဏ္ဍအဖြစ်ဖော်ပြနေသည် "arousal ။ " Generalized arousal တိုးမြှင့်မော်တာလှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်မှတ်သားခြင်းနှင့်အာရုံခံခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဓိကလှုံ့ဆော်မှုမှတုန့်ပြန်ကြီးထွားနေသည် [37-40] ။ လျော့နည်းမကြာခဏအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်သို့သော် [ကြောင်း arousal စနစ်များရုံအိပ်ပျော်ခြင်း / ပါတီအားထိုကဲ့သို့သောသတိဝီရိယအဖြစ်သံသရာ, စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်များစွာသောစိတ်ရောဂါမမှန်လက္ခဏာတွေထိန်းညှိထက်အများကြီးပိုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်ဖြစ်ပါသည်41] ။ အဆိုပါ medulla နှင့် pons, midbrain, နှင့် paraventricular, dorsomedial နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic အရေးပါ၏ reticular ဖွဲ့စည်းရေးအပါအဝင် generalized arousal ်ပတ်သက်နေအရေးကြီးတာက, ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ  Hcrt အာရုံခံထံမှစီမံချက်များလက်ခံရရှိသည်။ ကျနော်တို့ Hcrts ဒီ arousal ကွန်ယက်ကို modulate နိုင်လျှင်, ၎င်းတို့သည်လည်းဖြစ်နိုင်ဖွယ်ဤကွန်ယက်အားဖြင့်ကြိုးကိုင်အပြုအမူတွေ modulate နိုင်ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြသည်။ အခန်းကဏ္ဍ arousal ဟာအိပ်စက်ခြင်းကိုလယ်အပြင်ဘက်ကိုလေ့လာထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူအတွက်ကစားရန်လူသိများသည်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းအားဖြင့်, စုံစမ်းစစ်ဆေး Non-အိပ်ပျော်ခြင်းအပြုအမူတွေအတွက် Hcrts ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပို. ပို. ဝတ္ထုသေးတိကျတဲ့ယူဆချက်လုပ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Hcrts စိတ်ကျရောဂါ၏ murine မော်ဒယ်များအတွက်အပြုအမူ modulate ကြောင်းဥပမာအားဖြင့်, မကြာသေးမီအစီရင်ခံစာများ [35-36] [arousal အပြောင်းအလဲနဲ့စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူလူသားများတွင်ချို့ယွင်းကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းစိတ်ရောဂါသုတေသနနှစ်ပေါင်း၏မျက်နှာကိုအတွက်နားလည်ပင် anticipatable ဖြစ်ပါသည်43].
Hctrs arousal ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းသို့မဟုတ်လိင်များအတွက် drive ကိုများကဲ့သို့အခြေခံ homeostatic ဖိအားကိုထိန်းညှိဖို့လိုအပ်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဖို့ပုံရသည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သ Hcrts allostasis များအတွက်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းတင်ပြသည်။ [homeostasis မတူဘဲ, allostasis ပုံမှန်အကွာအဝေးအပြင်ဘက်အဆင့်ဆင့်မှာတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်ရိပ်မိခြင်းနှင့်မျှော်လင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တောင်းဆိုချက်များကိုကိုက်ညီဖို့ပြည်တွင်းရေး milieu ကွဲပြားနေဖြင့်အောင်မြင်နေသည်44,45] ။ ဥပမာအားဖြင့်, [စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာအပေါ်ကယ်လိုရီကန့်သတ်များ၏သက်ရောက်မှုများစမ်းသပ်လတ်တလောလေ့လာမှုကိုစဉ်းစား46] ။ စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာချိတ်ဆက်အလုပ် [preprohypocretin နောက်ကောက်ကြွက်နှင့် Hcrt အာရုံခံဆဲလျ-ablated ကြွက်စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်ဖိအားလျော့ချစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကိုပြသကွောငျးဖျောပွသ47] ။ သို့သော်အချို့စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုနှစ်ခုစလုံးအတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်မှုနှင့်နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်သဖြင့်သွေးဆောင်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုများကသွေးဆောင်စူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုရန်, ထိန်းသိမ်းထားကြသည်။ ဤသည်စိတ်ဖိစီးမှု [စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေသည်46] ။ Fascinatingly, allostatic ဖိအားအောက်မှာ Hcrts တကယ်ဦးနှောက် arousal ၏ "homeostatic" ထိန်းချုပ်မှုပြန်လည်နေရာချထား, စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေတားစီးနိုင်ပါတယ်။ ကယ်လိုရီ-ကန့်သတ်ကြွက်တစ်အတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်မှုအတွက်ပိုကောင်းလုပ်ဆောင် (immobility နှင့်လျော့နည်းစုစုပေါင်း immobility မှမဟုတ်တော့ latency ရှိ) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လူမှုရေးအပြန်အလှန်လိုငွေပြမှုပြကြဘူး ကြော်ငြာ libitumကြွက် -fed ။ Hcrt တရားမဝင်သောကြွက်ကဤကယ်လိုရီ-ကန့်သတ်အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်စေမပြကြဘူး။ ထိုမှတပါး, ကယ်လိုရီကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်က c-Fos အပြုသဘော Hcrt အာရုံခံ၏နံပါတ် [လူမှုရေးအပြန်အလှန်စမ်းသပ်မှုအပေါ်တိုးတက်မှုနှင့်အတူပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်နွယ်နေပါသည်46] ။ ဤသည် Hcrt အာရုံခံတိရစ္ဆာန်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုများကသွေးဆောင် maladaptive စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများကိုကျော်လွှားရန်ခွင့်ပြုကယ်လိုရီကန့်သတ်ထားတဲ့ allostatic generalized စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုဖျန်ဖြေကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ Hcrts သေချာပေါက်ကယ်လိုရီ-ကန့်သတ်များ၏အခြေအနေများတွင်ပုံမှန်အခြေအနေများအောက်တွင်အစားအစာစားသုံးမှုလှုံ့ဆော်ကြဘူးပေမယ့်အလားတူ, Hcrts [အစားအစာ-anticipatory အပြုအမူအတွက်သပ္ပါယ်တိုးဘို့လိုအပ်သောများမှာ48] ။ ဒီလေ့လာမှုကနောက်ထပ် Hcrt အာရုံခံဤကိစ္စတွင်အတွက်တိရိစ္ဆာန်များကြောင့်ရရှိနိုင်သည့်ကန့်သတ်အချိန်များစဉ်အတွင်းအစားအစာရရှိရန်နိုးနှင့်လှုံ့ဆော်ပါလိမ့်မည်သေချာ, အပြုအမူအတွက် allostatic အပြောင်းအလဲများကိုဖျန်ဖြေကြောင်းပြသသည်။ ပိုပြီးသုတေသနပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများအမျိုးမျိုးအတွက် Hcrts များ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်နေချိန်မှာ, ဤဥပမာကျနော်တို့ homeostasis နှင့် allostasis အတွက် Hctrs ၏အခန်းကဏ္ဍကိုတန်ဖိုးထားသည့်အခါ Hcrts ၏ဇီဝကမ္မလုပ်ငန်းဆောင်တာသာအပြည့်အဝထင်ရှားဖြစ်လိမ့်မည်ကိုဘယ်လိုဥပမာပေးရ။
၎င်းတို့၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကတည်းကဆယ်နှစ်များတွင်ကျနော်တို့ဦးနှောက် Hcrt သည့်စနစ်အကြောင်းအများကြီးသင်ယူကြသည်။ အမှန်စင်စစ်နိုးနိုးကွားကွားမြှင့်တင်ရန်အတွက် Hcrts ၏အခန်းကဏ္ဍကိုတာတော့သေချာတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအဖြစ်ကောင်းစွာအခြားအပြုအမူတွေအတွက် Hcrts များအတွက်ယေဘုယျအခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. စဉ်းစားများအတွက်မူဘောင်အကြံပြုထားသည်။ ပိုပြီးသုတေသန Hcrts ၏တိကျသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို elucidate ဖို့လိုအပ်နေချိန်မှာ, အ Hcrt စနစ်၏ဖြစ်ကောင်းအခန်းကဏ္ဍကိုသာအပြည့်အဝ organismal homeostasis နှင့် allostasis များ၏အခြေအနေတွင်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။ ခေတ်မီသစ်ကိုပုံရိပ်နှင့် optogenetic နည်းပညာများနှင့်အတူ, လာမယ့်ဆယ်နှစ်မျှသံသယဒီစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဦးနှောက် arousal စနစ်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥာဏ်ပညာ၌ဆက်လက်တိုးတက်လာဆံ့မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ hypocretin သည့်စနစ်နှင့် ပတ်သက်. မဖြေရှင်းနိုင်မေးခွန်းများကို
Hcrt အရေးပါအတွင်းရှိအလုပ်လုပ်တဲ့ subdivisions ဖြစ်ပါသလား [အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းတစ်အခန်းကဏ္ဍကစားတစ်ဦးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လူဦးရေနှင့် arousal နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအတွက်အခန်းကဏ္ဍကစားတစ်ဦးထက်ပို medial လူဦးရေ: ဒါဟာ Hcrt အာရုံခံအနည်းဆုံးနှစ်ခု discrete အလုပ်လုပ်တဲ့လူဦးရေရှိပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်53] ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများကဒီအယူအဆစမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်နေပါသည်။
နှစ်ခု Hcrt receptors differential ကွဲပြားဇီဝကမ္မလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်အပြုအမူထိန်းညှိသလား? တစ်ဦးအမူအကျင့်ကိုထိန်းညှိဘို့လိုအပ်သောသူတို့နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ကြ၏သို့မဟုတ်လုံလောက်သောတစ်ခုတည်းအဲဒီ receptor ပါသလဲ
Hcrt အာရုံခံဦးနှောက်ထဲမှာအများအပြားက်ဘ်ဆိုက်များမှထုတ်လုပ်တဲ့နေဖြင့်နိုးနိုးကွားကွားမြှင့်တင်ရန်, ဒါမှမဟုတ်အာရုံခံ၏အနည်းငယ် key ကိုလူဦးရေသလား? ထိုကဲ့သို့သောအိပ်စက်ခြင်း၏လှန် / လာသောသေတ္တာမော်ဒယ်အဖြစ်အိပ်ပျော်ခြင်း / ပါတီအား circuitry အတော်ကြာမော်ဒယ်များ, Hcrt, ထိုကဲ့သို့သော LC ကဲ့သို့သောအခြား arousal စင်တာများမှထုတ်လုပ်တဲ့ကနိုးပြည်နယ်ပိုကောင်းစေပါတယ် TMN နှင့် dorsal raphe အရေးပါ [ကြောင်းအကြံပြု7] ။ သို့သော်ဤအရေးပါ၏တွေ့ရှိရပါသည် [သမျှသောဤအရေးပါအတူတူတိရိစ္ဆာန်အတွက် ablated ပင်အခါ, တစ်ဦးကြံ့ခိုင် phenotype ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြဘူးနှင့်ပုံမှန်နိုးနိုးကွားကွားထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်54] ။ ထို့ကြောင့် Hcrt neurotransmission ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုအပ်သော postsynaptic က်ဘ်ဆိုက်များရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးဖြစ်ကြသည်။
အဘယ်အရာကို allostatic ဖိအားလိုအပ်သောသို့မဟုတ် Hcrt-mediated arousal မောင်းထုတ်ရန်လုံလောက်သောရှိပါသလဲ ဘယ်လိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဖိအားဟာ Hcrt စနစ်၏ activation သို့ဘာသာပြန်ဆိုသလဲ?
MEC ၏နှင့် JSB အမျိုးသားသိပ္ပံဖောင်ဒေးရှင်းကနေဘွဲ့လွန်သုတေသန Fellowship ဆုပေးပွဲကထောက်ခံကြသည်။ MEC ၏အစကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes ကနေအမျိုးသားသုတေသနဝန်ဆောင်မှု Award ဆုကထောက်ခံသည်။ LDL အမျိုးသားမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အင်စတီကျု, DARPA ကနှင့် NARSAD ထံမှထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံသည်။
* 1 ။ Lin က L ကို, Faraco J ကိုလီ R ကို, Kadotani H ကို, ရော်ဂျာ W က, Lin က X ကို, Qiu X ကို, de Jong က PJ, Nishino က S, Mignot အီးအဆိုပါအိပ်စက်ခြင်းရောဂါခွေးတစ်ကောင် narcolepsy အဆိုပါ hypocretin အတွက် mutation ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ် (orexin) အဲဒီ receptor2ဗီဇ ။ cell ။ 1999; 98: 365-376 ။ [PubMed]
*2။ Chemelli RM, ဝီလီ JT, Sinton CM, Elmquist JK, Scammell T ကလီကို C ရစ်ချတ်ဆင်ဂျာ et al Williams က SC, Xiong Y ကို, Kisanuki Y ကို။ orexin နောက်ကောက်ကြွက်တွေမှာ Narcolepsy: အိပ်စက်ခြင်းစည်းမျဉ်း၏မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇ။ cell ။ 1999; 98: 437-451 ။ ဤရွေ့ကားလေ့လာမှုများ Hcrt စနစ်၏ dyregulation narcolepsy စေလုံလောက်ကြောင်းညွှန်ပြရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကား seminal စာပမြေားကိုအလွန် narcolepsy နှင့်အိပ်စက်ခြင်းမမှန်များ၏အကြောင်းရင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတိုးပွားလာခြင်းနှင့်လည်းနိုးနိုးကွားကွားနှင့် arousal များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် Hcrts များအတွက်အလွန်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ [PubMed]
3 ။ Hara J ကို, Beuckmann မှန် CT, Nambu T က, ဝီလီ JT, Chemelli RM, Sinton CM, Sugiyama က F, Yagami K ကို Goto K ကို Yanagisawa က M, et al ။ ကြွက်တွေမှာ orexin အာရုံခံ၏မျိုးဗီဇ ablation narcolepsy, hypophagia နှင့်အဝလွန်မှု။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2001; 30: 345-354 ။ [PubMed]
4 ။ လူ့ narcolepsy အတွက် Nishino က S, Ripley B, Overeem S က, Lammers GJ, Mignot အီး Hypocretin (orexin) ချို့တဲ့ခြင်း။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet ။ 2000; 355: 39-40 ။ [PubMed]
5 ။ Thannickal TC, Moore က RY, Nienhuis R ကို, Ramanathan L ကို, Gulyani S က, Aldrich M က, Cornford M က, Siegel JM ။ လူ့ narcolepsy အတွက် hypocretin အာရုံခံအရေအတွက်လျှော့ချ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2000; 27: 469-474 ။ [PubMed]
*6။ Sakurai တီ orexin များ၏အာရုံကြောဆားကစ် (hypocretin): ထိန်းသိမ်းခြင်းအိပ်စက်ခြင်းမနိုး။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ Reviews ။ 2007; 8: 171-181 ။ အဆိုပါ Hcrt system ပေါ်တွင်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အိပ်စက်ခြင်း / ပါတီအားအသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြန်ဖြေအတွက် Hcrts ၏အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍ။ [PubMed]
*7။ Saper သမဝါယမ, Scammell TE, အိပ်ပျော်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian rhythms ၏ Lu ကဂျေ Hypothalamic စည်းမျဉ်း။ သဘာဝ။ 2005; 437: 1257-1263 ။ brainstem နှင့် hypothalamic အရေးပါနေဖြင့်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian rhythms ၏ subcortical စည်းမျဉ်းတခုတခုအပေါ်မှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်။ တစ်ဦးကမော်ဒယ် Hcrt အာရုံခံနိုးနိုးကွားကွားထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍကစားခြင်းနှင့်တကွ, အိပ်ပျော်ခြင်းစည်းမျဉ်း၏ "လှန် / လာသောသေတ္တာ" မော်ဒယ်အဆိုပြုထားသည်။ [PubMed]
** 8 ။ et al Lecea L ကို, Kilduff TS, Peyron ကို C, Gao xB, Foye PE, Danielson PE, Fukuhara ကို C, Battenberg elf, Gautvik VT, Bartlett FS, II, က de ။ အဆိုပါ hypocretins: neuroexcitatory လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ Hypothalamus-တိကျတဲ့ peptides ။ သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 1998; 95: 322-327 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
**9။ Sakurai T က, Amemiya တစ်ဦးက, Ishii M က, Matsuzaki ငါ Chemelli RM, Tanaka H ကို, et al Williams က SC, ရစ်ချတ်ဆန်ဂျာ Kozlowski မိသားစုဆရာဝန်, Wilson က S နဲ့။ Orexins နှင့် Orexin receptor: အပြုအမူနို့တိုက်ကျွေးထိန်းညှိကြောင်း Hypothalamic Neuropeptides နဲ့ G ပရိုတိန်း-coupled receptors တစ်မိသားစု။ cell ။ 1998; 92: 573-585 ။ ထိုသူနှစ်ဦးလေ့လာမှုများ, ပု peptides ဖော်ထုတ်သည်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus, သူတို့ရဲ့ receptors, သူတို့၏ neuroexcitatory လှုပ်ရှားမှု၌မိမိတို့စကားရပ် Hcrt စနစ်အားရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြသည်။ [PubMed]
10 ။ ချက်ကိုဟိုင်နိုနင်သင်္ဘော MV, Purhonen AK, Mäkelä Ka, Herzig KH ။ အရံတစ်ရှူးအတွက် orexins ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ။ Acta Physiologica ။ 2008; 192: 471-485 ။ [PubMed]
11 ။ Yoshida K ကို McCormack က S, Espana RA, Crocker တစ်ဦးက, Scammell TE ။ ကြွက်ဦးနှောက်၏ orexin အာရုံခံမှ Afferents ။ နှိုင်းယှဉ် Neurology ၏ဂျာနယ်။ 2006; 494: 845-861 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
12 ။ Henny P ကို, ဂျုံးစ် BE ။ GABAergic, glutamatergic သို့မဟုတ် presynaptic vesicular သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် postsynaptic ငြမ်းပရိုတိန်းအဘို့အ immunostaining ခြင်းဖြင့်သက်သေ cholinergic Basal forebrain ဆိပ်ကမ်းအားဖြင့် orexin / hypocretin အာရုံခံ၏ Innervation ။ နှိုင်းယှဉ် Neurology ၏ဂျာနယ်။ 2006; 499: 645-661 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
13 ။ Ohno K ကို Sakurait တီ Orexin အာရုံခံ circuitry: အိပ်စက်ခြင်းမနိုး၏ rgulation အတွက်အခန်းကဏ္ဍ။ Neurodendocrinology အတွက်နယ်စပ်ဒေသ။ 2008; 29: 70-87 ။ [PubMed]
* 14 ။ Peyron ကို C, Tighe DK, ဗန်တွင်း Pol AN, က de Lecea L ကို, Heller HC, Sutcliffe JG, Kilduff TS ။ အကွိမျမြားစှာအာရုံခံစနစ်များမှ Hypocretin (Orexin) စီမံကိန်းပါဝင်တဲ့အာရုံခံ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 1998; 18: 9996-10015 ။ ဒီလေ့လာမှုက Hcrt-ဖော်ပြအာရုံခံ၏ efferent စီမံချက်များ map မှ immunohistochemistry ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောအရေးပါဖို့ပျံ့စီမံချက်များအပေါ်အခြေခံပြီး, စာရေးသူ, Hcrts အများအပြားဇီဝကမ္မလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်ဖြစ်သည်သောအိပ်စက်ခြင်း / ပါတီအားသံသရာအတွက်အထူးသဖြင့်တစ်ဦးအခန်းကဏ္ဍကိုသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ [PubMed]
15 ။ lang M က, Bufe B, De Pol S က, Reiser အို Meyerhof W က, Beck-Sickinger AG က။ သူတို့ရဲ့ receptors ၏ activation များအတွက် orexins ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဂုဏ်သတ္တိများ။ Peptide သိပ္ပံဂျာနယ်။ 2006; 12: 258-266 ။ [PubMed]
* 16 ။ Kelz ကို MB, Sun က Y ကို, ချန် J ကို, Cheng Meng မေး, Moore က JT, Veasey SC, Dixon က S နဲ့, Thornton က M, Funato H ကို, ယေဘုယျမေ့ဆေးအနေဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာအတွက် orexins များအတွက် Yanagisawa အမ်တစ်ခုမရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2008; 105: 1309-1314 ။ ဒီလေ့လာမှုက Hcrts ဘုံထုံဆေး isofluorane နှင့် sevofluorane ၏အုပ်ချုပ်မှုပြီးနောက်သတိလစ်မေ့မြောရာမှပုံမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းပြသသည်။ ဒီအမေ့ဆေးအနေဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာအိပ်ပျော်ခြင်း / ပါတီအား circuitry နှင့် Hcrt စနစ်ကအဓိကကစားသမားကြောင်းမူတည်ကြောင်းပြသသည်။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
17 ။ Espana RA, Baldo BA, ကယ်လီ AE, Berridge CW ။ မြှင့်တင်-နိုးနှင့် hypocretin (orexin) ၏အိပ်စက်ခြင်း-နှိပ်ကွပ်လုပ်ရပ်များ: လုပ်ဆောင်ချက် Basal forebrain ဆိုဒ်များ။ neuroscience ။ 2001; 106: 699-715 ။ [PubMed]
18 ။ Piper, DC, Upton N ကို, Smith က MI, Hunter AJ ။ အဆိုပါဝတ္ထုဦးနှောက် neuropeptide, orexin-A, ကြွက်များ၏အိပ်ပျော်ခြင်း-ပါတီအားသံသရာ modulates ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2000; 12: 726-730 ။ [PubMed]
** 19 ။ Adamantidis AR, Zhang က F ကို, Aravanis လေး, Deisseroth K ကို hypocretin အာရုံခံ၏ optogenetic ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူပျေါနိုးထ၏က de Lecea အယ်လ်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအလွှာဟာ။ သဘာဝ။ 2007; 450: 420-424 ။ Optogenetic နည်းပညာ Hcrt အာရုံခံ၏ဆွနှေးကွေး-လှိုင်း-အိပ်ပျော်ခြင်းသို့မဟုတ် REM အိပ်နေစဉ်တစ်နိုးထအဖြစ်အပျက်၏ဖြစ်နိုင်ခြေတိုးမြှင့်ဖို့လုံလောက်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းသည် Hcrt စနစ်လျှောက်ထားသည်။ ဒီအကြိုးသကျရော Hcrt peptides မဟုတ်, အခြားအ neurotransmitters, Hcrt အာရုံခံ၏ပါတီအား-မြှင့်တင်သက်ရောက်မှုများအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြ, Hcrt KO ကြွက်နှင့်တစ်ဦး Hcrtr-1 ရန်၏ရှေ့တော်၌ပိတ်ဆို့ထားပါသည်။ [PubMed]
20 ။ Muroya S က, Funahashi H ကို, Yamanaka တစ်ဦးက, Kohno: D, Uramura K သည်, et al Nambu T က, Shibahara M က, Kuramochi M က, Takigawa M က, Yanagisawa က M ။ Orexins (hypocretins) တိုက်ရိုက် Ca ထိန်းညှိဖို့ neuropeptide Y ကို, POMC နှင့်ဂလူးကို့စ-တုံ့ပြန်မှုအာရုံခံတွေနဲ့အပြန်အလှန်2+ leptin တစ်ဦးအပြန်အလှန်ထုံးစံ၌အချက်ပြ: အ mediobasal hypothalamus အတွက် orexigenic အာရုံခံလမ်းကြောင်း။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2004; 19: 1524-1534 ။ [PubMed]
** 21 ။ Harris က GC, Wimmer M က, ဆုလာဘ်ရှာအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic orexin အာရုံခံအဘို့အ Aston-Jones ဟာဂျီတစ်ဦးရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ။ 2005; 437: 556-559 ။ [PubMed]
** 22 ။ Boutrel B, Kenny PJ, Specio SE, မာတင်-Fardon R ကို, Markou တစ်ဦးက, Koob gf, ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ဖြန်ဖြေအတွက် hypocretin ဘို့က de Lecea အယ်လ်အခန်းက္ပ။ သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2005; 102: 19168-19173 ။ ဒီလေ့လာမှုတွေအပြုအမူရှာကြံဆုလာဘ်အတွက် Hcrt system အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ, လက်ရှိစွဲသုတေသနတစ်ခုတက်ကြွဧရိယာသရုပ်ပြပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြသည်။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
* 23 ။ Aston-ဂျုံးစ်, G, စမစ် RJ, Moorman DE, ရစ်ချတ်ဆန် Ka ။ ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်စွဲလမ်းအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic orexin အာရုံခံ၏အခန်းက္ပ။ Neuropharmacology ။ (အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါ) စာနယ်ဇင်းများတွင် 2008 ဆောင်းပါးအပြုအမူတွေကိုရှာကြံဆုလာဘ်အတွက် Hcrts ၏အခန်းကဏ္ဍကိုပေါ်တွင်မကြာသေးမီကသုတေသနပြုအပေါ်တစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
* 24 ။ Winsky-Sommerer R ကို, Boutrel B က, က de Lecea အယ်လ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် arousal: အ corticotrophin-releasing အချက် / hypocretin circuitry ။ မော်လီကျူး Neurobiology ။ 2005; 32: 285-294 ။ Hcrts ပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားတုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ဆက်စပ်တိုးလာ arousal ထိန်းညှိအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှအထောက်အထားတွေကိုလေ့လာကြည့်ရှုသောပြန်လည်သုံးသပ်။ [PubMed]
25. Chen CT, Hwang LL, Chang JK, Dun NJ ။ orexins ၏ဖိအားသက်ရောက်မှုများမှာ intracisternally နှင့်မေ့ဆေးကြွက်များ၏ rostral ventrolateral medulla သို့ထိုးသွင်းသည်။ ဇီဝကမ္မဗေဒ၏အမေရိကန်ဂျာနယ် - စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ 2000; 278: R692-697 ။ [PubMed]
26 ။ ရှံဆုန် wk, Gosnell B, Chang-JK, Resch ZT, Murphy က TC ။ ဦးနှောက်ထဲမှာ hypocretins ၏နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းလုပ်ရပ်တွေကို။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1999; 831: 248-253 ။ [PubMed]
27 ။ Shirasaka T က, Nakazato M က, Matsukura S က, Takasaki M က, သတိကြွက်များတွင် orexins ၏ Kannan အိပ်ချ်စာနာခြင်းနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာလုပ်ရပ်တွေကို။ ဇီဝကမ္မဗေဒ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1999; 277: R1780-1785 ။ [PubMed]
* 28 ။ Winsky-Sommerer R ကို, Yamanaka တစ်ဦးက, Diano S က, Borok အီး, Roberts သည် AJ, Sakurai T က, Kilduff TS, Horvath TL, အ Corticotropin-ဖြင့်ထုတ်လွှ Factor စနစ်နှင့် Hypocretins (Orexins) အကြားက de Lecea အယ်လ် Interaction: တစ်ဦးကဝတ္ထုတိုက်နယ်ဖျန်ဖြေစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2004; 24: 11439-11448 ။ ဒီလေ့လာမှုက Hcrt အာရုံခံ CRF ပါဝင်သောအာရုံခံထံမှ excitatory input ကိုလက်ခံရရှိနှင့်ဤတိုက်နယ်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ် arousal အတွက်တိုးဖျန်ဖြေခြင်းအလိုငှါကြောင်းခန္ဓာဗေဒနှင့် electrophysiological သက်သေအထောက်အထားများတင်ပြသွားပါသည်။ [PubMed]
29 ။ ရှံဆုန် W က, တေလာက M, ဖာဂူဆန်အေအဆိုပါ hypocretins / orexins နှင့် hypothalamo-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး။ ခုနှစ်တွင်: de Lecea L ကို, Sutcliffe J ကို, အယ်ဒီတာများ။ Hypocretins: ဇီဝ Functions များ၏ Integrated ။ Springer; 2005 ။ စစ။ 369-382 ။
30 ။ သိုးသငယ်ကို ek, Olausson P ကို, Horst NK, တေလာ JR, Aghajanian GK ။ Hypocretin နှင့်နီကိုတင်းစိတ်လှုပ်ရှား Prefrontal Cortex အတွက်အတူတူပါပဲ Thalamocortical synapses: Rat အတွက်တိုးတက်ကောင်းမွန်သောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူညမညသဘောတရား။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2005; 25: 5225-5229 ။ [PubMed]
* 31 ။ JW, Dominguez JM, Sato သည် SM, Shen RY, Hull က EM Muschamp ။ အမျိုးသားလိင်အပြုအမူအတွက် Hypocretin (Orexin) အတွက်တစ်ဦးကအခန်းက္ပ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2007; 27: 2837-2845 ။ ဤသည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလေ့လာမှု Hcrts အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ် arousal အတွက်ပုံမှန်တိုးဘို့လိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းပြသသည်။ ထို့အပွငျ electrophysiological သက်သေအထောက်အထား Hcrts အဆိုပါ mesolimbic dopaminergic system ကိုသက်ဝင်စေကြောင်းအကြံပြု, ဤ circuitry ထိုကဲ့သို့သောလိင်သဘာဝဆုလာဘ်သည် arousal လွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါ။ [PubMed]
32 ။ Fronczek R ကို, Overeem S က, Lee က SYY, Hegeman ထားတဲ့ IM, ဗန်ရေ J ကို, ဗန် Duinen စင်ကာပူဒေါ်လာ, Lammers GJ, Swaab DF ။ Hypocretin ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် (orexin) အရှုံး။ ဦးနှောက်။ 2007; 130: 1577-1585 ။ [PubMed]
* 33 ။ ဆော်လမွန် RM ။ စိတ်ရောဂါ Disorders အတွက် Hypocretin ဆောင်ရွက်ချက်များ။ Nishino က S, Sakurai T က, အယ်ဒီတာများ in: ။ အဆိုပါ Orexin / Hypocretin စနစ်။ Humana စာနယ်ဇင်း; 2005 ။ စစ။ 317-327 ။ ဒီအခန်းဟာ Hcrt system ကို schizophrenia, စိတ်ကျရောဂါနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်, စိတ်ရောဂါရောဂါအချို့လက္ခဏာတွေလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါ, အကြံပြုခြင်းသက်သေအထောက်အထားဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါဟာအစစိတ်ရောဂါကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည်အခြားဦးနှောက်စနစ်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့ Hcrt system ကိုအသုံးပြုနည်းလမ်းများအဆိုတင်သွင်း။
34 ။ Deutch AY, Bubser အမ်အဆိုပါ Orexins / Hypocretins နှင့် Schizophrenia ။ Schizophrenia သတင်းလွှာ။ 2007; 33: 1277-1283 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
35 ။ Brundin L ကို, Björkqvist M ကတစ် Petersen, Träskman-Bendz အယ်လ်အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါနှင့်အတူသတ်သေလူနာများ၏ cerebrospinal fluid အတွက် orexin အဆင့်ဆင့်လျှော့ချ။ ဥရောပ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 17: 573-579 ။ [PubMed]
36 ။ clomipramine ၏မွေးကင်းစကလေးများအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်စိတ်ကျရောဂါတစ်ခုကြွက်မော်ဒယ်အတွက်ဦးနှောက် orexin အဆင့်ဆင့်အတွက် Feng တို့ P ကို, Vurbic: D, Wu-Z, Hu Y ကို, Strohl K. အပြောင်းအလဲများ။ Psychopharmacology ၏ဂျာနယ်။ 2008; 22: 784-791 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
* 37 ။ Pfaff: D, Ribeiro တစ်ဦးက, Matthews က J ကို, Kow LM ။ Generalized ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် arousal ၏သဘောတရားများနှင့်ယန္တရားများ။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2008; 1129: 11-25 ။ ဒါကသီအိုရီစာတမ်း CNS အတွက် generalized arousal စနစ်၏တည်ရှိမှုအဘို့သက်သေအထောက်အထားများကိုထောက်ပံ့ပေး, ပြီးတော့ဒီစနစ်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဘယ်လိုများအတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အဆိုတင်သွင်း။ ဒါဟာတိကျတဲ့ arousal ကနေကွာခြား, ယေဘုယျ arousal အခြေခံသည့်, neuroanatomical neurophysiological နှင့် Genomics ယန္တရားများဖော်ပြသည်။ ဒါဟာအစထိုကဲ့သို့သောငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုက၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian အိပ်ပျော်ခြင်းသံသရာစဉ်အတွင်းနိုးထဖို့တိရိစ္ဆာန်ဦးဆောင်သကဲ့သို့, တိကျတဲ့ arousal စနစ်များကိုဆန့်ကျင်နိုငျသောစိတ်ဝင်စားဖို့စိတ်ကူးပေါ်ပေါက်။ [PubMed]
38 ။ Garey J ကို, Goodwillie တစ်ဦးက, Frohlich J ကို, မော်ဂန်က M, Gustafsson ဂျာ Smithies အို Korach KS, Ogawa S က, Pfaff DW ။ ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူများ၏ယေဘူယျ arousal မှမျိုးဗီဇပံ့ပိုးမှုများကို။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2003; 100: 11019-11022 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
39 ။ Levenson RW ။ စိတျလှုပျရှားမှုများထဲတွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအာရုံကြောစနစ်များကွာခြားချက်များ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ 1992; 3: 23-27 ။
40 ။ Levenson RW ။ သွေး, ချွေး, နှင့်ကြောက်လို့။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2003; 1000: 348-366 ။ [PubMed]
41 ။ Bryant RA, Harvey AG က, Guthrie RM, မှို ML ။ တစ်ဦးက Psychophysiological arousal ၏အလားအလာလေ့လာမှုစူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှု Disorder နှင့် Posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှု Disorder ။ ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2000; 109: 341-344 ။ [PubMed]
42 ။ ဦးနှောက် somatomotor-စာနာဆားကစ်၏ကာမန်ဗြဲအဖွဲ့။ စမ်းသပ်ဆဲဦးနှောက်သုတေသန။ 2008; 187: 1-16 ။ [PubMed]
43 ။ Moratti S က, Rubio, G, Campos P ကို, Keil တစ်ဦးက, ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်ထဲမှာစိတ်ခံစားမှု arousal စဉ်အတွင်းညာ Temporoparietal Cortex ၏ Ortiz တီ Hypofunction ။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်း။ 2008; 65: 532-541 ။ [PubMed]
* 44 ။ McEwen B, Wingfield JC ။ ဇီဝဗေဒနှင့်ဇီဝဆေးပညာအတွက် allostasis ၏အယူအဆ။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 2003; 43: 2-15 ။ allostasis ၏အယူအဆနှင့်ခန္ဓာကိုယ် allostatic ဖိအားတုံ့ပြန်ရန်ခွင့်ပြုသောဇီဝကမ္မယန္တရားများမှတစ်ဦးကကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိတ်ဆက်စကား။ [PubMed]
* 45 ။ ရောဘတ် AJ, Heyser CJ, Cole ကို M က, Griffin P ကို, Koob gf ။ မှီခိုနေတဲ့သမိုင်းကိုအောက်ပါအလွန်အကျွံအီသနောအရက်သောက်: allostasis ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2000; 22: 581-594 ။ ဒီလေ့လာမှုက allostatic ယန္တရားများမူးယစ်ဆေး relapse, တိုက်ဆိုင် Hcrt system ကို activation အားဖြင့်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းခဲ့သည်တစ်ဦးအမူအကျင့်ကိုရှင်းပြနိုငျသောယူဆချက်ကိုထောကျပံ့ဖို့သက်သေအထောက်အထားပေးစွမ်းသည်။ [PubMed]
* 46 ။ Lutter M က, Krishnan V ကို, Russo SJ, Jung က S, McClung, CA, Nestler EJ ။ Orexin signal ကယ်လိုရီကန့်သတ်များ၏စိတ်မကျဆေး Antidepressants-လိုပဲ Effect Mediates ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2008; 28: 3071-3075 ။ ဒါဟာမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုကိုအသုံးပြုပြီး Hcrt စနစ်၏အချို့လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသာ allostatic ဖိအားများ၏ရှေ့မှောက်တွင်ရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်လိုဖော်ပြသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်မှာဥပမာမှာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုအလှည့်ထဲမှာနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု၏စိတ်ကျရောဂါသက်ရောက်မှု counteracts သော Hcrt စနစ်, မြှင့်လုပ်ဆောင်။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
၄၇။ Kayaba Y၊ Nakamura A၊ Kasuya Y, Ohuchi T, Yanagisawa M, Komuro I, Fukuda Y, Kuwaki T. ကာကွယ်ရေးတုန့်ပြန်မှုနှင့် orexin နောက်ကောက်ကြွက်များတွင် Basal သွေးပေါင်ချိန်နိမ့်ခြင်း။ ဇီဝကမ္မဗေဒ၏အမေရိကန်ဂျာနယ် - စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ 47; 2003: R285-581 ။ [PubMed]
* 48 ။ Akiyama M က, Yuasa T က, Hayasaka N ကို, Horikawa K ကို Sakurai T က, Shibata အက်စ်ဗီဇ orexin (hypocretin) အာရုံခံဆဲလျ-ablated ကြွက်တွေမှာအစားအစာ anticipatory လှုပ်ရှားမှုလျှော့ချ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2004; 20: 3054-3062 ။ ဒီလေ့လာမှုက allostatic ဖိအားလျှောက်ထားသောအခါပု Hcrt စနစ်၏အချို့လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသာနောက်တဖန်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု၏ပုံစံ, လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်မည်သို့နောက်ဥပမာပေးပါသည်။ [PubMed]
* 49 ။ Roecker တစ်ဦးက, Coleman P. Orexin အဲဒီ receptor ရန်: ဆေးဖက်ဝင်ဓာတုဗေဒနှင့်ကုထုံးအလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓါတုဗေဒအတွက်လက်ရှိခေါင်းစဉ်များ။ 2008; 8: 977-987 ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို pharmacologically အိပ်စက်ခြင်းအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှကုသမှုနှင့်အခြားစိတ်ရောဂါမမှန်များအတွက် Hcrt system ကိုပစ်မှတ်ထားအတွက်ဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်းများကတိုးတက်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ [PubMed]
50 ။ စမတ်: D, Sabido-သည်ဒါဝိဒ်ကို C, Brough SJ, Jewitt က F, Johns တစ်ဦးက, Porter RA, Jerman JC ။ SB-334867-တစ်ဦးက: ပထမဦးဆုံးရွေးချယ် orexin-1 အဲဒီ receptor ရန်။ ဆေးဝါးဗေဒဗြိတိသျှဂျာနယ်။ 2001; 132: 1179-1182 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
* 51 ။ et al Brisbare-Roche က C, Dingemanse J ကို, Koberstein R ကို, Hoever P ကို, Aissaoui H ကို, Flores S က, Mueller ကို C, Nayler အိုဗန် Gerven J ကို, က de Haas SL ။ ကြွက်, ခွေးနှင့်လူသားအတွက် orexin system ကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့်အိပ်ပျော်ရာမြှင့်တင်ရေး။ Nature Medicine ။ 2007; 13: 150-155 ။ ဒီလေ့လာမှုက Hcrt receptors နှစ်ဦးစလုံးပစ်မှတ်ထားတဲ့ Hcrt အဲဒီ receptor ရန်ဖော်ပြထားတယ်, နှုတ်အုပ်ချုပ်နိုင်ပြီးအလွယ်တကူထိုအသွေး-ဦးနှောက်အတားအဆီးဖြတ်သန်းသွားသည်နှင့် Vivo အတွက် reversibly လုပ်ကွက် Hcrt function ကို။ [PubMed]
* 52 ။ Zeitzer JM, Nishino က S, Mignot အီး hypocretins (orexins), narcolepsy နှင့်ဆက်စပ်ကုထုံးကြားဝင်၏ neurobiology ။ Pharmacological သိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2006; 27: 368-374 ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို Hcrt အာရုံခံသို့မဟုတ် Hcrt အဆင့်ဆင့်လှုံ့ဆော်ဖို့ကြိုးစားနေအသုံးပြုပုံသို့မဟုတ် pharmacologically သည်အခြားဦးနှောက် arousal စနစ်များကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ, ထို Hcrt စနစ်၏ dysregulation နှင့်အတူလူနာအတွက် arousal လှုံ့ဆော်၏နည်းလမ်းများမီးမောင်းထိုးပြ။ [PubMed]
53 ။ Harris က GC, Aston-ဂျုံးစ် G. အ arousal နှင့်ဆုလာဘ်: orexin function ကိုတစ်ဦး dichotomy ။ neuroscience အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2006; 29: 571-577 ။ [PubMed]
54 ။ Blanco-Centurion ကို C, Gerashchenko: D, Shiromani PJ ။ အိပ်စက်ခြင်းနှင့်ဝိတ်၏နေ့စဉ် Levels အပေါ်သုံး arousal လူဦးရေရဲ့ Saporin-သွေးဆောင်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2007; 27: 14041-14048 ။ Hcrt အာရုံခံထံမှမိုးသည်းထန်စွာ afferent စီမံချက်များလက်ခံရရှိကြောင်းအာရုံခံသုံးခုလူဦးရေဟာအိပ်စက်ခြင်း / ပါတီအားသံသရာမှာသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ရန်အတွက်တူညီသောတိရိစ္ဆာန်အတွက် lesioned နေကြသည်။ အိပ်စက်ခြင်းနှင့်ပါတီအား၏ Daily သတင်းစာအဆင့်ဆင့် Hcrt ရဲ့နိုးထ-မြှင့်တင်သက်ရောက်မှုဦးနှောက်အတွင်းအပိုဆောင်းသို့မဟုတ်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရေးပါကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု, အတော်လေးပုံမှန်ဖြစ်ကြသည်။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]